Mpanakanto mpivady : Tena nisaraka sa mampitombo laza i Big MJ sy Arnaah? -
AccueilVaovao SamihafaMpanakanto mpivady : Tena nisaraka sa mampitombo laza i Big MJ sy Arnaah?
Mpanakanto mpivady : Tena nisaraka sa mampitombo laza i Big MJ sy Arnaah?
05/01/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Fomba iray hampitana vaovao ho an’ny olona sasany ny tambazotra facebook. Nalaza omaly teo amin’io tambazotra io ny filazan’i Big Mj sy Arnaah fa hisaraka izy ireo. Namoaka izany ny pejy facebook an’i Big Mj , ary nanamafy izany i Arnaah. « Io aloha ny zava-misy hatreto fa tsy afaka hanome fanampim-baovao ankoatra ireo izahay », araka ny tafa tamin’ny antso an-tarobia nifanaovana tamin’ny mpikarakara an’i Big Mj. Enin-taona no efa nifankatia ireto mpanakanto ireto, ary nisy ny lanonana nakotroka notronin’ireo fianakaviana sy ny namana tamin’ny fankalazana ny fanambadian’izy ireo. « Nandritra ny 6 taona, ny fitiavanay, izaho sy Arnaah, dia tsy nisy fetra nefa tsy midika ho mandrakizay ny Magneva » araka ny filazan’i Big Mj ao amin’ny pejiny. « Maty ny afo nampiray anay, ary tao anatin’ny fifanarahana no nanapahanay hevitra ny hamarana ny fiarahanay, nefa tsy manakana ny fiaraha-miasanay eo amin’ny sehatry ny mozika izany », hoy ihany izy.
Hatreto aloha, dia tsy fantatra ny tena marina amin’izy roa ireto. Somary efa nahagaga ihany ny tsy niarahan’izy ireo namarana ny taona 2017, raha tafaraka hatrany tao anaty afisy ny anaran’i Big Mj sy Arnaah, ary toa vary sy rano izy ireo tamin’ireo fampisehoana maro nandritra ny taona. Tany andafin’ny riaka i Big Mj no namarana ny taona, raha nijanona teto an-tanindrazana i Arnaah.
Na izany aza, anisan’ireo fantatra amin’ny fakana tahaka ny zava-misy iainan’ireo mpanakanto vahiny izy mivady ireto, na teo amin’ny fomba fitafy izany, na teo amin’ny fomba fiainana. Santionany amin’izany ny rakikira « Magneva » izay ahatsiarovana ny fiarahan’i Beyonce sy Jay Z. Efa nisy iany koa ny fotoana nampalaza ny fisarahan’izy ireo, nefa mbola niverina niaraka indray. Tena fisarahana tokoa ve araka izany ny an’i Big Mj sy Arnaah, sa hevitra ara-barotra hampitomboina ny lazan’izy ireo ? Ho hitantsika ny ho tohiny.